मुटु रोगी आमा बचाउन पानी बेच्दै ९ बर्षिय नानी, सानै उमेरमा यत्ति धेरै पिडादयी कहानी (भिडियो सहित) – दैनिक नेपाल न्युज
मुटु रोगी आमा बचाउन पानी बेच्दै ९ बर्षिय नानी, सानै उमेरमा यत्ति धेरै पिडादयी कहानी (भिडियो सहित)
करिब ९ बर्षकी सानी नानी, हातमा २/४ बोतल पानी बोकेर साँझपख बसन्तपुर आसपास दाई पानी किनिदिनोस् न भन्दै हिड्नु उनको आफ्नै बाध्यता । घरमा आमा विरामी छिन्, उनका अनुसार आमा मुटुरोगी अनि बा वितिसके ।
तैपनि आफु स्कुल पढ्न र विरामी आमालाई अलिकत्ति भए नि राहत मिलोस् भनि उनी यसरी खट्छन् जो उनको साहस पनि हो बाध्यता पनि । आखिर यि सानी नानी अर्चना आफु यो उमेरमा यसरी काम गर्दा कस्तो अनुभव गर्छिन् त ? हेर्नुहोस् यो भिडियो…
सपनामा कमलको फूलले भरिएको तलाउ देखेमा के हुन्छ? : लाभदायक २५ चिजहरू
पानको पातका गायक बम बहादुर कार्कीको आफु भन्दा ८ बर्षिय कान्छीसंग अन्तरजातीय बिहे, १० बर्ष सम्म ससुराली जान पाएनन्